🥇 ▷ Isbarbardhiga waxqabadka cusub ayaa tijaabinaya RX5700 XT ee ka dhanka ah RTX 2080 Super ✅
Isbarbardhiga waxqabadka cusub ayaa tijaabinaya RX5700 XT ee ka dhanka ah RTX 2080 Super
Maalmahan ay runti ka shaqeysay aaladda qalabka ayaa soo celisay tabaha looguna talagalay jiilka soo socda, waxaa la maleynayaa in awooda kuwaan ay u dhigmi doonto mid ay soo bandhigtay kumbiyuutar leh RTX 2080. In kasta oo ay ku sii jirto ikhtiyaarka Ray Raadinta Hawada, waxaan u aragnay waqtigaas sidii hagaajinta saacadda RX5700 XT Waxay ku soo dhowaatay wax qabadkeedii. Hadda, oo leh tirada cusub ee ‘Nvidia Super’, waa waqti ku habboon in la dhiso isbarbardhig cusub. Isbarbardhiga waxqabadka cusub ayaa dhigaya isku day RX5700 XT ee ka dhanka ah RTX 2080 Super.
Qaabkaan waxaan isku dayeynaa inaan isbarbar dhigno moodel ku dhawaad ​​400 oo Euro ah, oo ah nooca ugu dambeeyay ee noocyada Nvidia, RTX 2080 Super, Waxay ku kacaysaa ku dhawaad ​​laba jibaar. Waa run in la sameeyo tijaabadan, oo ay fuliso mareegta bartilmaameedka YouTube, moodalka AMD waxaa loo qaaday xadka cusub saacadda, sameynta xad dhaafka ah ilaa 2.1Ghz.
Marka la eego kala duwanaanshaha sicirka waxaan arki karnaa haddii aysan muhiim aheyn in lagu faafiyo Ray Tracing, xulashada AMD Radeon RX5700 waxay noqon kartaa mid aad u xiiso badan. Waa run in haddii ay raadsanayeen falanqaynta waxqabadka ee waxa ku saabsan kuwa mustaqbalka noqon kara, ay iyagu dooran lahaayeen inay kor u qaadaan AMD Ryzen oo u dhigma. Hadda, waxaan u deganahay tijaabooyinka isbarbardhiga cusub ee RX5700 XT ee ka dhanka ah RTX 2080 Super, halkaas oo lagu arkay in marka si wax ku ool ah AMD ay u fulin karto si isku mid ah.
Haddaba, falanqaynta fiidiyowga si qoto dheer waxa la soo saari karo waa in wax qiimo ah laga yeesho lacag haddii ay u muuqato inay iska caddahay Radeon inuu yahay ikhtiyaarka iibsashada. Ka baxsan arrintan,, Nvidia RTX 2080 Super Waxay ka sareysaa ciyaaraha badankood la tijaabiyay. Waqtiyada oo dhan waa la arki karaa labadaba dayactiraan wax ka badan 60fps Ciyaarahaas, inkasta oo lagu jiro hagaajinta tayada aadka u sarreeya hadana waxaa la ogaaday in 4K aan la istcimaalin.
Tani waxay la xiriiri kartaa ujeeddada ay Microsoft ka muujisay arrintaas Xbox Scarlett Ha diiradda saarin wax sawirada garaafyada sida bixinta waxqabadka qiyaastii 60fps ee xalka 4K. Tilmaamo horumar leh oo si wanaagsan loo qeexay oo ah hagaajinta aragtiyaha ku xeeran SoC Gonzalo iyo SoC Flute ayaa u muuqda inay ku habboon yihiin waxaan ku aragno fiidiyowyada isbarbardhiga. Isbarbar dhigga GPU ee Playstation 5 iyo Xbox Scarlett labadaba noocyada horumarkooda, siday u kala horreeyaan, waxay ka bixin doonaan wax qabadkan xawaaraha saacad ee la shaandheeyay shalay. Hadday ku habboontahay 2Ghz, waxay umuuqataa in chipset jaantuskan lagu soo bandhigi karo wax qabad ku dhawaad ​​60fps, in kasta oo laga yaabo inay lagama maarmaan tahay in la arko sida loo habeeyo dhinacyo kale si qaraarka uu u sareeyay isla markaana waxqabadka uusan u dhicin, halka RDNA iyo SSD waxay ciyaari karaan door aasaasi ah, marka lagu daro CPU ma noqon doonto isku mid sida kiiskan.
Waxa muuqata inay iska muuqato ayaa ah hagaajinta RX5700 xawaare ka sareeya waxqabadka warshadda si cad ayaa loo xoojiyay. Si kastaba ha noqotee, waa inay tixgeliyaan qaboojiyaha marka la eego walaaca ka dhashey in 110 ° C xogta laga helo AMD ay xaqiijiso inay ku dhexjirto xaddiga caadiga ah. Waxaan ka feejignaan doonnaa wixii macluumaad ah ee ka soo baxa horumarka AMD ee kufaarta jiilka cusub, halkee waa Xbox Scarlett.